အယ်ဖိုး: F.E.A.R. 3
F.E.A.R.3| 4.07 GB
ဒီဂိမ်းလေး ကတော့ သေနက်ပစ်ဂိမ်းလေးပါပဲ၊သရဲလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ ပါဝါတွေလဲ ပါပါတယ်၊ဒေါင်းရတဲ့ GB ကတော့ နဲနဲများပါတယ်ဗျာ၊ဂိမ်းတွေလဲမတင်ဖြစ်တာကြာပါပီဗျာ၊စာမေးပွဲရက်အတွင်းဖြစ်နေလို့ပါ၊Medifire နဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ၊Crack လဲတစ်ခါထဲပါပါတယ်ဗျာ၊Skidrow ဆိုတဲ့ Floder ထဲမှာပါဗျာ၊ စိက်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါဒေါင်းလိုက်ပါဗျာ။
Intel Processor - Core2Duo E7500 2.93GHz
AMD Processor - Phenom II X2 550
Nvidia Graphics - GeForce 9500 GT
ATI Graphics - Radeon HD 3870
Posted by Peace at 8:15 AM